Oromiyaa.gov.et - About Us
THE MESSAGE OF DIRECTOR GENERAL MR.ALIYE HUSSEIN
Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonna Oromiyaa labsii mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. 44/1993 ji’a Adoolessaa keessa heera mootummaa naannichaa bu’uura godhachuun hundeeffame. Hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaatti imaammata misooma qonnaa mootummaan baase galmaan gahuuf dhimmoota kamiyyuu caalaa hojii qorannoo qonnaaf xiyyeeffanna guddaa kennuun akkaataa agiroo ikolojii naannoo keenyaatti kan hundeeffaman giddugaleessota qorannoo qonnaa 17 keessatti argamaniin humna raawwachuu hojii qorannoo isaanii cimsanii akka hojjatan taasisuun; hojii qonnaa naannoo keenyaa hammayyeessuu kan dandeessisan teknoolojiiwwan hedduu baasuun, baay’isuufi tamsaasuun omishaafi omishtummaa qonnaa naannoo keenyaa bara baraan dabalaa akka deemuu danda’u hojii jajjabeessaa raawwachaa jira. Raawwiin kunis galma karoora guddinaafi tiraanisfoormeeshiniif aggaamame biraan gahuuf kan dandeessisu ta’uusaa agarsiisa.
Inistiitiyuutichi qorannoo yommuu geggeessu galmoota gurguddoo sadii irratti xiyyeeffata. Isaanis, hirmaachisummaa, fedhii maamiltootaafi haala gabaa waliin kan deemu ta’uu isaa irratti xiyyeeffateeti. Haaluma kanaan hojiiwwqn qorannoo kamiyyuu keessatti hirmaannaan fayyadamummaa dargaggoo, dubartootaa fi qooda fudhattootaa xiyyeeffannaan kan ilaalamu ta’a.
Kunimmoo, mirkanaa’uu isaa beekamuu kan danda’u teknoolojiiwwaan maddisiifamaniifi madaqfaman haala gaarii ta’een fayyadamtoota biratti yeroo fudhatama aragatudha.
Oromiyaa keesstti qorannoo geggeeffamu akkaataa aadaa hawaasaa, haala qilleensaa, haala qabatamaa sadarkaa maatii (household environment) ilaalcha keessa kan galchedha. Kanaafuu, giddugaleessonni qorannoo qonnaa fayyadamtootaafi qooda fudhattoota wajjin ta’uun fedhii teknoolojii battalumatti barbaachisaa ta’aniifi dursanii barbaadaman addaan baasu keesssatti walitti hidhiinsaan ni hojjatu. Hojmaatni kunis teknoolojiin maddisiifamu fedhii tajaajilamaa irratti kan hundaa’eefi fayyadamtootaan fudhatama akka argatu taasisa.
Haala kanaan teknoolojii argametti fayyadamuun omishaafi omishtummaa guddisuun midhaan nyaataan of danda’uu bira darbee omisha qulqullinaan dorgomaa ta’ee gabaaf dhiyaatuufi sharafa argamsiisuun dinagdee keenya guddisuu keessatti shoora guddaa kan taphatudha.
Walumaagalatti akkaataa haala qilleensa naannoo keenyaa kan bu’uureffate Godinaalee adda addaa keessatti kan argaman Giddugaleesoota Qorannoo 17 hundeessuun hojii qorannoo isaa gama kallattii hundaan kan gaggeessun teknolojii mijataa maddisiisuun omishitummaa keenya guddisu keessatti gahee guddaa taphataa jira.
Kaayyoo isaa galmaan gahuufis ergamaa fi mul’ata isaa irraatti kaayyeffatee hojjachaa kan jiru yommuu ta’u;